OFX South America Evolution FSX & P3D sano 3 3 bilood ka hor #559
Markay bixisay lacagta Jumbo si loo soo dejiyo "OFX South America Evolution FSX & P3D"Waxaan ka walaacsanahay sababta uu Antivirus-hagu u qaadayo feejignaanta fayraska oo uusan ii oggolaanaynin inaan furo faylka exe.
Avast ayaa sheegay in Win32: EVO-GEN
Qof kastaaba wuu ogyahay haddii uu fayrusku yahay mid dhab ah?
OFX South America Evolution FSX & P3D sano 3 3 bilood ka hor #560
Rog, waa wax aan caadi ahayn *. Taasi waa sababta aan u joojiyay isticmaalka. Waxyaabo badan oo been abuur ah. Waxaan u isticmaalay rikoooo for QUITE waqti qaarna marna ma helin fayraska hal.
waad fiican tahay inaad tagto
Wax walbo oo laga walwalo
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Ace9
OFX South America Evolution FSX & P3D sano 3 3 bilood ka hor #562
Alaarmooyinka been abuurka ah meel kasta ...
OFX South America Evolution FSX & P3D sano 3 3 bilood ka hor #566
Anigu waxaan soo dejiyey Stanley (Falklands) oo la mid ah FTX Base, waxaan eegay moodada iyo OFX South America ayaa ah kan ugu sarreeya liiska mudnaanta leh kaliya garoonka Ushuaia ee kor ku xusan. Ma jiraa wax aan ka maqnaado jadwalka qalabka dhismaha, sida qalabka OFX config?
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.194